Codsiga Guurka Priscilla - Websaydh WEBTOON KELIYA
Codsiga Guurka Priscilla Celceliska 3.9 / 5 ka mid ah 7
N / A, waxay leedahay 12.7K views
Priscilla Motia waxay ka shaqeysaa sidii sixirbarar oo kale askartii caloosheeda ka shaqeysata, laakiin mar waxay ahayd gabadha kaliya ee la tirin karo. Ilaa aabbeheed uu dhinto, oo ay aayodeed ka heshay nasiibkeeda inay ka iibiso ninkeeda qiimaha badan ninkeeda la furay oo 10 sano ka weyn… Shil markii uu u shaqeynayay calooshood u shaqeysteyaal, Priscilla waxay gacmaheeda ku haysatay masduulaagii Riyoon ka hor inta aysan dhiman… Tani waa fursad ay dib ugu soo ceshato 15-kii sano ee ay lumisay! Waxay ka go'an tahay inay ku sii wado kasbashada weyn. “Waad soo noqotay!” Laakiin waxa ka sugayay Priscilla deyn aad u weyn oo ay sababtay ninkeeda furriinka xun Isagoo raadinaya aargudasho, Priscilla wuxuu raadiyaa Kian Rustin, Dhimashada Madoow ee Beerta Nabadda oo uu weydiisto, "Waan ku faraxsanahay inaan ku weyddiisto." Maxaad dooneysaa inaan sameeyo? Tani ma isku day dil baa? ” “Kian Rustin! Fadlan ninkeyga noqo. Marka, Priscilla ma awoodi doonaa inuu ku guuleysto labadaba dhulka iyo jacaylka?
Cutubka 52 February 22, 2021
Cutubka 51 February 14, 2021
Cutubka 50 February 8, 2021
Cutubka 49 February 1, 2021
Cutubka 48 January 26, 2021
Cutubka 47 January 19, 2021
Cutubka 46 January 12, 2021
Cutubka 45 January 4, 2021
Cutubka 44 December 28, 2020
Cutubka 43 December 22, 2020
Cutubka 42 December 15, 2020
Cutubka 40 December 2, 2020
Cutubka 39 November 26, 2020
Cutubka 38 November 19, 2020
Cutubka 37 November 13, 2020
Cutubka 36 November 9, 2020
Cutubka 35 November 2, 2020
Cutubka 34 October 21, 2020
Cutubka 33 October 15, 2020
Cutubka 32 October 8, 2020
Cutubka 31 July 13, 2020
Jacaylka Degdega ah
Sayidkeyga, Jacaylkeyga Koobaad